Madimikira erudo muChirungu - UniProyecta
Kana iwe uchida mitsara yerudo, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuve nechokwadi ndechekuti zvakanyorwa nemazvo, nekuti nekuda kwezvikonzero zvekusaziva uye kuda kukwezva kutarisa nekukasira, tinogona kukanganisa, mune zvimwe zviitiko, zvisingaregererwe. Nechikonzero ichi, kunzvenga nguva dzakaipa neumwe wedu, zvakanakisa kushandisa mushanduri chaiye kuve nechokwadi chekuti chirevo chacho chakarurama muChirungu kana anoziva yedu 100 Mitsara yeRudo muChirungu !!, (Pazasi ⬇⬇).
Kune rimwe divi, kana chirongwa chako chiri chekutema munyengetero uzere nerudo uye nemanzwiro, imwe nzira yakanaka ndeyekuwana nyanzvi yeinki inoziva mutauro uyu, nekuti izvi zvinokupa chivimbo nekuzviisa paganda rako rose nguva .. hupenyu hwako.
Kune rimwe divi, aya mitsara yerudo haingokubatsire iwe kukunda iye munhu wezviroto zvako, asi zvakare ichakubvumidza iwe kuyanana newaunoda. Edza, shandisa aya matipi uye tinokuvimbisa kuti mumwe wako achakuregerera zvese zvakaipa.
Zvakare, kana iwe uchida kugara uchishandisa zvirevo mumutauro uno, asi iwe ukapererwa nesarudzo, imwe nzira ndeyekushandura zvaunonzwa zvakadzika kuburikidza nemidziyo yemagetsi, semuenzaniso, muturikiri akanaka anogona kuve shamwari yako huru yekukurudzira kuda kwako vaviri.
Usanetseke! Ongorora uye woratidza manzwiro ako nenzira yakasarudzika uye isingaenzanisike. Isu tine chokwadi chekuti mumwe wako achakutenda uye iwe unozowana zvibodzwa zvakawanda muhukama hwako. Pano isu tinokupa iwe zvese zvinodikanwa maturu kuti iwe ushandise iyo rudo mitsara muChirungu Nzira yakanakisa. Tora mukana! Nekuti rudo neumwe wako zvakakosha.
1 Chirongwa chekunyengedza nemitsara iyi
2 Akanakisa zana emitsara yerudo muChirungu kwaari ❤
2.1 Akakurumbira "echinyakare" mitsara
2.2 Zvemabhaisikopo emamuvhi mitsara
2.3 Mitsara muMumhanzi
2.4 Mitsara mumabhuku
2.5 Mitsara muuzivi
2.6 Mitsara "Yazvino"
Chirongwa chekunyengedza nemitsara iyi
Kana pakati pezvirongwa zvako zvekunyengedza pane iyo rudo mitsara muChirungu, Ndinofanira kukuudza kuti iyi sarudzo yakanakisa, nekuti iri nzira yakanaka yekuratidza manzwiro ako ese vamwe vasingaone. Mitsara yakatanhamara neshanduro yavo yaunogona kushandisa ndeiyi:
" (Ini handigoni kurega kufunga nezvako).
" (mauri ndawana rudo rwehupenyu hwangu uye shamwari yangu yepamwoyo)
" (moyo wangu wakakwana nekuti uri mukati).
" (ndiwe wega kwandiri), kungotaura mashoma. Sei usinga wande murudo neaya mazwi anobata mweya wako?
Akanakisa zana emitsara yerudo muChirungu kwaari ❤
Iyi mitsara zana inotevera inoumbwa nemataurirwo mapfupi kana marefu neshanduro yavo. Iwe uchada aya makotesheni sezvaari hushamwari, zvekare, mimhanzi, mabhuku, mafirosofi uye erudo mafirimu.
Akakurumbira "echinyakare" mitsara
Rudo, pakati pevamwari, ishamwari yemunhu, chiremba, uyo anodzokera kumamiriro ekare, achiedza kuita munhu ane makore maviri ekuberekwa, rudo rwunoedza kurapa hunhu hwevanhu.
Jupita anonyemwerera vanoda kunyepa.
Izwi rimwe rinotisunungura kubva pakurema nekurwadziwa kwehupenyu: iri izwi rudo.
Icharatidza firita yerudo isina chepfu, kana mahebhu, isina mashiripiti mafomula: kana iwe uchida kudiwa, rudo!
Rudo rwechokwadi haruna kumboyerwa.
Kune chimwe chiedza, kwandiri chakanyanya kuvimbika kupfuura izvi, pasi pekutungamira kwako, rudo rwangu rwakarasika murima.
Iwe unofanirwa kumuka mumaziso, muhusiku, mupfungwa, kana eyelids akavharwa, akakundwa nekurara murunyararo. Yaizondibata sei, pachangu, dai ndaikuda pasina iwe zvandanga ndisati ndaona?
Ndipe tsvodi churu, kwozoti zana, kwozotevera rimwe chiuru, kwozotevera rimwe zana, kwozotevera rimwe chiuru, kwozotevera zana. Chekupedzisira, kana isu takapiana zviuru zvevatsvoda, tsime, negodo rakawanda zvekuti hatizokwanisa kuzviverenga.
Ndinovenga, kana ndichigona; kana zvisina kudaro ini ndichada zvisinei neni.
Zvemabhaisikopo emamuvhi mitsara
Paive nemurume, aindibata zvakaipa kwazvo. Zvaive zvakanaka.
Ini ndiri nani pane chokoreti
Iwe uri gwara, hauna kana ushingi hushoma, hauna kana nyore uye wepamoyo kuziva kuti munyika muno unodanana. Inofanira kunge iri yemumwe munhu nekuti iyi ndiyo chete nzira yekufara!
Vhura maziso ako unditarise Kwete, ini handina kana kukutsvoda, kunyangwe kana uchida. Ndiro dambudziko: iwe unofanirwa kutsvoda, uye kazhinji, uye nemunhu anoziva kuzviita.
Moyo wemukadzi igungwa rakadzika rezvakavanzika.
Ndinoziva kuti ndiwe ani uri padyo nemoyo wangu nguva dzese dzauri. Ndinoziva kuti ndiwe ani, zviroto zvangu zvese, nyaya yacho inotapira iwe.
Ini ndiri musikana akareruka ari pamberi pemukomana uye anomukumbira kuti afarire ...
Ah, Sabrina, Sabrina… wanga uri kupi hupenyu hwangu hwese?
Kazhinji kacho, haisi iyo chimiro chemuviri chatinoita, asi nzira dzekuita kuti munhu akwezve.
Rudo rwakafanana nemhepo, asi ini handioni, ndinoziva kuti rwuripo nekuti ini ndinorinzwa.
Rudo harugone kutsanangurwa nenzira yedenga kana yegungwa kana chero chimwe chakavanzika. Uye "ziso ratinoona naro, ndiye mutadzi mune chinoyera, ndicho chiedza chine ruvara."
Nhetembo, runako, kudanana, rudo - izvi ndizvo zvinhu zvinoita kuti urarame.
Koni pfuti? Kwete, anorova moyo.
Rudo rwakafanana neokisijeni! Rudo chinhu chinoshamisa, chinotisimudzira kudenga! Chaunongoda rudo!
Iva ', kanganwa huropi uye teerera kune moyo wako. Ini handinzwe moyo wako, nekuti chokwadi, mudiwa, ndechekuti hazvina musoro kurarama kana iwe ukarasikirwa neizvi ...
Zviroto zvishuwo zvinovhara pasi pemoyo wangu, muchiroto, zvinoita kunge zvechokwadi uye zvese zvine chekuita nerudo. (Cinderella)
Ini ndinofarira iyo iyo inotonhora apo yaive 25 degrees kunze. Ini ndinoda chokwadi chekuti zvinotora awa nehafu kuodha sangweji. Ini ndinoda mutsetse mudiki unoumba pamhino dzako paunonditarisa kunge ndinopenga. Ndinoda kuti mushure mekupedza zuva newe ndinogona kunzwa kunhuwirira kwako pamapfekero angu. Uye ini ndinoda kuti iwe ndiwe wekupedzisira munhu waanoda kutaura naye asati arara husiku. Hazvina kuti ndiri ndoga, uye hapana chokuita chokwadi kuti zviri New Year. Ndauya pano manheru ano nekuti paunoona kuti urikuda kushandisa hupenyu hwako hwese nemumwe munhu, unoda kuti hupenyu hwako hwese hutange nekukurumidza sezvazvinogona.
Kenduru rinovhenekera zvakapetwa kaviri, rinopisa muhafu yenguva.
Molly, ndinokuda. - «Ditto»
"Wanonoka". "Wakanaka". - "Hazvina kunonoka kwauri"
Bruce: «Kwete, ndinoda kuti afare zvakadaro, ndinoziva kuti zvinosanganisirei, ndinoda kuti awane mumwe munhu achamubata nerudo rwese rwaakakodzera kubva kwandiri, ndinoda kusangana ne… murume achiri kumuona sa Ndinoita izvozvi kuburikidza nemaziso avo. "Mwari." Uyu munamato.
Rudo runoda zvese uye rune kodzero yekuzviita.
Ndiwe mweya unogara uchitora kufema kwangu, iro chete zita rinouya mupfungwa kana uchiedza mazwi. Ndimi nzira yandinozviita nayo ...
Vamwe vanoti kunaya kwakashata, asi havazive chinobvumira musoro kutendeuka mudenga kumeso kwakafukidzwa nemisodzi.
Chero ani anokukuvadza muhupenyu, unofanirwa kusarudza kuti ndiani akakosha.
Vanoti rudo hupenyu, ndinofa nerudo.
Iwe uri mandiri, semafungu akakwira ...
Musungwa mujeri risingaperi, ndinogona kuzvinzwa kana iwe usiri mumoyo mangu.
Ndinokubvunza, enda mune imwe nguva, hupenyu hwangu huri muchiyero, asi ini ndinokubvunza iwe. nyeredzi yakanaka, inopenya kuburikidza nemisodzi, kumashure ...
Ndichakupa kutungamira kwemoyo wangu, ndinogara ndichidaro.
Handina kana chinhu chasara, ikozvino zvandinovhenekera rudo rukuru uye kunze.
Iwe uri waini nechingwa, izvo zvakasikwa zvinodikanwa? Iwe uri dutu rinondiburitsa zuva, zvinyoro nyoro ...
Murudo zvakanyanya uye zvakanyanya mukudzika kwemweya kwauri kwekusingaperi ...
Ndiri murima uye ndinofunga nezvako, ndinovhara maziso angu uye ndinofunga nezvako, handirari uye ndinofunga nezvako ...
Ndatenda nekuita kuti ndiputse moyo wangu, pakupedzisira mwenje unogona kupinda.
Hapana chimwe chinhu chandinoda, maziso ako anosangana zvakare, kuzvinyoresa uye kuzvarwa patsva.
Unofa zvishoma kuti urarame ...
Paunenge uri pano neni, imba ino haina madziro ...
Ndiri kuda kuenda kure newe kuti wadonhedza moyo wangu ...
Yako, iwe ndiwe wakanakisa chinhu chakamboitika kwandiri.
50. Unozorora here nguva zhinji paunodonha uye unotora maruva ako uye uteedzere uyu mugwagwa ucharasikirwa nendege yako uye haumbopindire, nekuti zvandiri kuda kuva newe, hapana ngetani kuti uve newe (Ron, hatidi mazwi)
Iwe unozorodzwa nguva zhinji sezvaunodonha wotora maruva ako uye uchitevera uyu mugwagwa, uchapotsa kubhururuka kwako uye usazombopindira, nekuti zvandiri kuda kuva newe, ndisina ngetani newe?
Zvakaoma zvikuru kuregerera avo vakakuita kuti ucheme uye unzwe zvakashata, asi kune hupenyu humwe chete uye ini ndinoda newe, nematambudziko ayo ese, zvese zviripo.
Rakaropafadzwa «zuva nemwedzi uye negore nemwaka, uye nguva uye nguva nenzvimbo yenyika yakanaka, nenzvimbo payakange iri, zvakabva pameso ako akanaka akasunga.
Chido icho murume anofanira kuda hachiperi, zvisinei, dai zvisiri zvemurume waunoda, rudo rusina miganhu.
Tora chingwa changu kana uchida, tora mweya wangu, asi usabvisa kunyemwerera kwako.
Kana iwe ukaverenga mavhesi aya, kanganwa ruoko rwakaanyora: Ndinokuda zvakanyanya zvekuti handaizogara mumifungo yako inotapira, kana iyo pfungwa yekunditambudza.
Kune zvakadzika izvo rudo risingakwanise kukunda, kunyangwe nesimba remapapiro aro.
Rudo ndicho chinhu chatiri kurarama. Pasina izvozvo zvinongomera chete.
Kudzikama hakugone kuve murudo, nekuti izvo zvakawanikwa hazvimbove idzva pokutangira yekuda zvimwe.
Hupenyu iruva, huchi hwerudo.
Varume vaizogara vari rudo rwekutanga rwemukadzi. Vakadzi vanofarira kuva murume wekupedzisira rudo.
Mufaro wekupedzisira muhupenyu kudiwa kune zvauri, kana kuti, kudiwa kunyangwe zvauri.
Ben anongoda avo vanogona kuratidza mumazwi kuti anoda zvakadii.
Vakadzi vanoitwa kudiwa, kwete kunzwisiswa.
Simba rangu hariperi segungwa, uye rudo rwangu haruna kudzika; Paunowedzera kuita, paunonyanya kuve nechipo, sezvo zvese zviri zviviri zvisingaperi.
Inofanira kurira senge kunzwisisa, asi isu tinofanirwa kuve takatosiyana kubva pakudanana.
Kana isu tikadzivisa zvishuwo, zvakanyanya nekuda kwekusasimba kwavo kupfuura nekuda kwesimba redu.
Zvese zvandinoda zvinorasikirwa nehafu yekunakidzwa kana iwe usipo kuti ugovana neni.
Vazhinji vanoti rudo runokunda avo vanotiza, vamwewo kuti runokunda avo vakamirira. Ini ndinoti rudo runokunda chete murudo uye kunyangwe rwusina kubhadharwa, runogara rwuri mukundi, nekuti rudo ndicho chinhu chakanakisa icho munhu anogona kuita.
Rudo nderwu: kuti maviri ega anodzivirira, kubata, kusangana.
Kuda mumwe munhu kuda kuchembera naye.
Ndingadai ndakarasika dai ndaigara chinguva ndisipo
Rudo harusi kutarisana; iri kutarisa kudivi rimwe chete.
Anongofarira zvausina kana nepadiki zvacho.
Rudo, zvakaoma sei ini ndinowana nhasi! Uye kana zvisina kudaro, izvo zvinotungamira kutariro, kufa kuchadonha, kwandinoshuvira kurarama zvakareba.
Chii chiri kufinha rudo inyaya yekuti imhosva iwe yausingakwanise kuita pasina waunoperekedza.
Rudo, rwakadzika kwazvo uye rwunoshuvira, runogara rwunotapira.
Icho chiitiko chevamwari mumaziso evadikani vaviri.
Urwu rudo ndirwo rwuripo ndirwo chete rwandinoziva nezverudo.
Rudo rwekubatana, runoramba ruchienderera kuburikidza nezviuru zviono, zvinoita kwandiri kunge ndiwo mashura akanaka kwazvo.
Rudo harwusi rudo kana rukachinja kana rukazviwana, kana kuti runowanzonyangarika kana. Haiwa! Rudo chiratidzo chinogara chakamisikidzwa chinotarisa madutu uye chisingazununguki; Rudo harushanduke nemaawa aro mapfupi nemavhiki, asi rwunotounzwa kumuromo kwekuparadzwa; Kana kukanganisa uku uye nezvangu zvakaratidzirwa, zvisina kupfupika, kana chero murume akamboda.
Ini handifunge zvakanyanya, asi kuda zvakanyanya, wadii kwete zvese zvinokurudzira kuda zvakanyanya?
Vanhu vanoda zvakakwana uye vakatendeseka ndivo vanhu vanofara kwazvo pasirese. Pamwe vane zvishoma, pamwe havana chinhu, asi vanhu vanofara. Izvo zvese zvinoenderana nekuti tinodanana sei.
Chiyero cherudo kuda pasina chiyero.
Kunaka sei kuve murudo, uye zvinonakidza kuziva kuita.
Rudo rwakafanana nedenda: chimwe chinotyiwa zvakanyanya, chinonyanyotarisana nehutachiona.
Rudo rwakaita serombo: harudi kuti umhanye mushure.
Iko kunogara kune tsanga yekupenga murudo, sekungogara kune tsanga yemafungiro ekupenga.
Kutya kwekunzwa kutapira ihwo hupenyu hwekutya, uye avo vanotya hupenyu vatove makota matatu vakafa.
Tinorangarira avo vaida zvakanyanya, nguva shoma vaitida.
Iko hakugone kuve nekuodzwa mwoyo kwakadzika uko pasina rudo rwakadzama.
Kuda hazvireve kuti uwane kukwana, asi kuregerera zvikanganiso zvinotyisa.
Rudo, hazvigoneke kutsanangurwa!
Vakadzi vakasarudzika vanobatana uye kunyemwerera; vamwe vanokwikwidza uye acidify.
Ndarama haisi zvese ... kune zvakare platinamu ...
Ndinoda imi mose nokusingaperi.
Zvirinani kuve wakada uye kurasikirwa pane kuti usatomboda.
Moyo wangu unotutuma pandakuona.
Rudo ndiko kushamisika kwekuzviwana, kwekuwana kutapira kwecabress, mufaro wekuva padhuze newe.
Ini handidi kuve mancarti kana uri wega, asi kana uine zvese uye kunyangwe zvese, iwe unonzwa kuti ndichiri kukusuwa.
Sei wakandipa ruoko? Nei zvinhu zvakanaka zvinowanzo mirira.
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Rudo mitsara muChirungu
3 comments pamusoro «Mitsara yerudo muChirungu»
Ndira 29, 2018 na7: 10 pm
Ndakavawana vakanaka chaizvo
Kukadzi 9, 2018 pa5: 19 pm
neaya mazwi erudo muChirungu ndakadanana nemurume wangu hmm sei kunaka
Chivabvu 1, 2018 na3: 31 pm
Akanaka mitsara yekutsaurira mukomana wangu